Buffon oo qarka u saaran inuu qandaraaska u kordhiyo kooxdiisa Juventus. - Caasimada Online
Home Warar Buffon oo qarka u saaran inuu qandaraaska u kordhiyo kooxdiisa Juventus.
Buffon oo qarka u saaran inuu qandaraaska u kordhiyo kooxdiisa Juventus.
Gianluigi Buffon ayaa qarka u saaran inuu qandaraaska u kordhiyo kooxdiisa Juventus wuxuuna nagi kusoo ahaan doonaa Juve ilaa 2016ka.
Gool hayahaan ayaa lagu sheegaa mid ka mid ah gool ilaaliyeyaasha ugu wanaagsan aduunka 40.5 milyan oo euro ayuuna Parma uga soo tegay sanadii 2001dii.
Warar soo baxaayey isbuucii lasoo dhaafay ayaa sheegayey in madax weyne Andrea Agnelli uu Buffon ka dalbaday qandaraas uu sanadii ku qaadanaayo 4.5 milyan oo euro.
Magaciisa oo dhameystiran waa Gianluigi Buffon, wuxuu dhashay 28dii January 1978 (da’diisu waa 34) wuxuu ku dhashay magaalada Carrara, ee dalka Italy, dhirirkiisu waa 1.91 Meter oo u dhiganta (6 ft 3 inches), wuxuu ka ciyaaraa booska goolhayaha. Juventus ayuuna haatan goolka u qabtaa.
Kooxda Parma ayuu u soo ciyaaray intii u dhaxeysay 1995 ilaa 2001 wuxuuna u saftay 168 kulan. Isagoona wixii intaas ka dambeey ku biiray kooxdiisa haatan ee Juventus, wuxuu u saftay 330 kulan. Goolhayahaan ayaana sidoo kale xulkiisa Italy u saftay 122 kulan.